मैनीक्योर विचारहरू जुन यस गर्मी 2021 मा व्यापक बढिरहेका छन् बेजिया
सुसाना Godoy | 02/06/2021 12:00 | न Nहरू
यद्यपि ग्रीष्म २०२० हामीले सोचेजस्तो थिएन, जस्तो देखिन्छ कि २०२१ मा हामी केवल केही छिन र सधैं टाउकोले भए पनि सपना देख्न थाल्छौं। तसर्थ, केहि क्षण अधिक बाँच्न को लागी, शर्त मा केहि पनी छैन यस गर्मी २०२१ मा व्यापक रूपमा जाँदैछन् भन्ने मेनीक्योर आईडियाहरू, जुन पहिले नै कुनामा छ।
त्यसैले तपाईं पछाडि नहुनुको कारण, हामी तपाईंलाई विचारहरूको श्रृ series्खलाहरू ल्याउँछौं जुन आधारभूत, आवश्यक र तपाईंले माया गर्न लाग्नु भएको छ। ताकि तपाईं जान सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रा रंगहरूको साथ तपाईंको मनपर्ने मैनीक्योरको फिनिश संयोजन। के तपाइँ यसको बारे थाहा पाउन चाहानुहुन्छ?
1 यस गर्मी २०२१ मा नेल रंग के प्रयोग गरीन्छ
2 नेल प्रवृत्ति 2021 स्वाभाविकता मा शर्त
3 फ्लोर प्रिन्टहरू मेनीक्योर विचारहरू मध्ये एक हो जुन व्यापक छन्
4 तपाईंको हातमा ज्यामितीय आकृति
5 पोल्का डट्सहरू पनि तपाईंको आदर्श मैनीक्योर आईडियाहरू हुनेछन्
यस गर्मी २०२१ मा नेल रंग के प्रयोग गरीन्छ
हामी एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शीर्षकबाट सुरू गर्छौं जसले रंगको बारेमा कुरा गरिरहेछन् जुन यस मौसममा सबैभन्दा बढी हुने छ। साथै, तिनीहरूले सबै शेडमा, गुलाबी मा शर्त। तर यो सत्य हो कि पहेंलो रंगले पनि प्रमुख भूमिका खेल्छ। त्यो हो, हामीले यस गर्मीमा लगाउने सबैभन्दा चम्किलो रंगहरू छन्। हामीले पहिले नै आशा गरेका थियौं किनकि हामीलाई न shमा पनि बढी चमक र बढी खुशी चाहिन्छ। निस्सन्देह, सेतो संगै एक बबलगम गुलाबी सही मैनीक्योर भन्दा बढी गठन गर्दछ, साथै केही फूलहरूलाई जीवन दिन पहेँलो। के यो एक उत्तम विचार होईन?
नेल प्रवृत्ति 2021 स्वाभाविकता मा शर्त
यो सत्य हो कि यदि तपाइँ तिनीहरूलाई धेरै पोइन्ट गर्न चाहानुहुन्छ, हामी त्यो भ्रम हटाउँदैनौं। तर यो यो हो कि हामीसँग सबै विकल्पहरू बाहेक, यस्तो लाग्दछ कि यस गर्मीले प्राकृतिकतामा दांव लगाइरहेको छ। छोटा अंडाकार आकारहरूसहित छोटा न nailsहरू, यसले तपाईंको हातहरूलाई थप शैली प्रदान गर्दछ।। यो सत्य हो कि ग्रीष्म weतुमा हामीसँग प्राय: धेरै घटनाहरू हुन्छन् र हामी जस्तै, हामी आफ्नो मेनीक्योर परिवर्तन गर्न चाहन्छौं। त्यसो हो भने, तपाईं ती डिजाइनहरूको लागि समय अनुसार अप्ट इन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाईंलाई धेरै मनपर्दछ। याद गर्नुहोस् कि राम्रो पोसाक गरिएका नखाहरू, जस्तै नग्न वा सेतो र चमकको स्पर्श जस्ता आधारभूत पालिससहित सधैं विजय हुन्छ।
फ्लोर प्रिन्टहरू मेनीक्योर विचारहरू मध्ये एक हो जुन व्यापक छन्
कुनै श doubt्का बिना, फूलहरूको साथ समाप्त गर्नु सधैं ती मैनीक्योर विचारहरू मध्ये एक हो जुन कहिले पनि शैलीको बाहिर हुँदैन। तसर्थ, यसले चोट पुर्‍याउँदैन कि हामी शैलीहरू परिवर्तन गर्दछौं। उदाहरण को लागी, सानो डेजीहरू सँधै सबैभन्दा धेरै अनुरोध गरिएको फूलहरू मध्ये एक हुन्यद्यपि तपाईं केहि पंखुलीहरू कोर्न सक्नुहुन्छ वा स्टिकरहरू द्वारा टाढा जान सक्नुहुन्छ। यी हामीलाई एक राम्रो पेशेवर समाप्त र पनि, विशिष्ट क्षणहरूमा देखाउनको लागि योग्य हुन उत्तम दिन। साथै, तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ, तपाईं जहिले पनि डिजाईन एउटा नेल मात्र बनाउन सक्नुहुनेछ वा धेरैमा। यो तिमीमा भर पर्छ!
तपाईंको हातमा ज्यामितीय आकृति
यो ती विकल्पहरुमा अर्को हो जुन ध्यान नदिई जान सक्दैन। हो, सायद यो सत्य हो कि यसको परिभाषित अवधि छैन किनकि प्रत्येक र ती सबैमा तिनीहरू एक प्रवृत्ति हुनेछ। यसैले ग्रीष्म inतुमा उनी पहिलेभन्दा अझ बाहिर आउन मन पराउँछन् जस्तो देखिन्छ। अरु के छ त, यदि केहि साइकेडेलिक ब्रशस्ट्रोक थपियो भने, अझ राम्राे। तपाईं तिनीहरूलाई प्रकाश र जीवन्त टोनमा जोड्नुहोस् तिनीहरूलाई पहिले जस्तो जस्तो देखिने बनाउनको लागि। पक्कै पनि त्यस तरीकाले तपाईं एक धेरै रचनात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
पोल्का डट्सहरू पनि तपाईंको आदर्श मैनीक्योर आईडियाहरू हुनेछन्
ज्यामितीय आकृतिहरूको रूपमा, पोल्का डटहरू ती विचारहरू मध्ये एक होइनन् जसले हामीलाई आश्चर्यचकित गर्दछन् तर उनीहरू गर्मीमा पनि हाम्रो पक्षमा हुन चाहन्छन्। त्यसकारण, यसले हामीलाई यसको बारेमा सोच्दै महान् विकल्पहरू दिन्छ। किनकि यो त्यस्तो क्षण हो जब हामी र most्गहरूलाई हामी धेरै मन पराउछौं वा हामी आफैंबाट टाढा रहन सक्छौं जुन हामीले उल्लेख गरेका गुलाबी र पहेंलो जस्तो प्रवृत्ति सिर्जना गर्न। प्रसिद्धहरू पहिले नै ढाल शैलीका साथ पोल्का डट्सहरूको लागि छनौट गरिरहेका छन्के यो राम्रो विचार होईन?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » न Nहरू » यस गर्मी २०२१ मा व्यापक रूपमा जाँदै जाने मेनीक्योर आईडियाहरू